बजेट निर्माणका लागि विज्ञसंँग छलफल | Nagarik News - Nepal Republic Media
३० जेष्ठ २०७५ ३ मिनेट पाठ
चितवन – भरतपुर महानगरपालिकाले विज्ञहरुको सुझावमा गुरुयोजना र सोही अनुसारको आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्न छलफल थालेको छ।
महानगरले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेल, शहरी पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठलाई विज्ञका रुपमा बोलाएर सुझाव लिइरहेको महानगरकी प्रमुख रेनु दाहालले जानकारी दिइन्।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ १२:३० बुधबार